Izindaba - SXY-M-FS550 umbiko womshini wokulima ojulile nomshini wokwenza impuphu
Muva nje, iqoqo lokuqala lemishini yezolimo entsha eyi-10 ngokuzimela eyenziwe yinkampani yakwaHebei Xuangong, isilawuli kude esizimele ngokwaso i-FS550 yokulima okujulile okushisayo nokuxegisa umlimi, sikhishwe ngempumelelo kulayini wokukhiqiza. Le modeli ilungele ukusebenza ezindaweni ezinezintaba nezinamagquma futhi inethemba elibanzi lemakethe.
Ihlose isikhala esikhulu sokuthuthuka kwezolimo elisha ezweni lami esikhathini esizayo, inkampani yethu iye yathuthukisa ngokulandelana i-FS770 enkulu kanye ne-FS550 ehlakaniphile yokulimaza okushisayo nokuxegisa abalimi, ngokuthembela kubuchwepheshe bayo obukhulu bokukhiqiza. Umlimi okhaliphile we-FS550 ufakelwe isistimu yokutshala ejulile engaphansi kwenhlabathi. Lolu hlelo lusebenzisa uhlobo olusha lwamabhithi wokubhola wokuvunguza amaningi, ajikeleziswa phansi ngejubane elingaphezulu kwamasentimitha angama-40, bese eshesha ngokushesha ahlanganise izingcwecwe zenhlabathi, alime ungqimba olungezansi, futhi alime umhlabathi. Ama-rhizomes ezitshalo achotshozwa ngokushesha aba yimpuphu eyimbudumbudu, ekhuthaza ukwabiwa okunengqondo kwezakhamzimba zenhlabathi kusendlalelo segeja, okusiza kakhulu ukuzala nokukhula kwamagciwane amancane omhlabathi futhi kukhulise ukujula kwezimpande zezitshalo, ezilungele izimpande ukumunca ngokuphelele futhi sebenzisa izakhamzimba. Umlimi we-FS550 usebenzisa ubuchwepheshe bokuxhumana obungenantambo phakathi kwamakhompyutha, futhi ngokwethulwa kwezinhlelo zokufaka isicelo ezihlakaniphile, izinzwa zifakiwe kudivayisi ngayinye ukuze ziqoqe ngokukhalipha idatha yedivayisi futhi zilawule isimo sokusebenza sedivayisi ngesikhathi sangempela. I-FS550 deep tillage tillage smashing and loosening umlimi angaqedela imisebenzi yezolimo eyedwa ngohlelo lokulawula okuzenzakalelayo. Ngakolunye uhlangothi, kunciphisa ukuqina komsebenzi we-opharetha, ngakolunye uhlangothi, kususa imikhawulo ekusebenzeni kwemvelo yangaphandle. Ingakwazi ukubona ukusebenza okuqhubekayo kwesimo sezulu, okunikeza isiqinisekiso esiqinile sokwakhiwa kwengqalasizinda yezolimo ezihlakaniphile eChina.
Ubuchwepheshe obujule kakhulu bokulima nokuchoboza inhlabathi obukhuthaze lesi sikhathi bunqamula enkambeni yendabuko yokuxegisa okujulile, ukulima, ukuhlukumeza, kanye nezinhlanga. Ingaqedela umsebenzi wokulungisa inhlabathi ngasikhathi sinye ngaphandle kokucekela phansi ungqimba lomhlabathi, ithathe isikhundla semisebenzi eminingi eyedlule yokufaka isitaki. Ingavula inhlabathi ejulile, yonge amanzi, umanyolo namandla, okuzokhuthaza ukwanda komkhiqizo wezolimo kanye nemali engenayo.